ငါးဆီသည်ငါးမျှားသောငါးသို့မဟုတ်ငါးမျှားခြင်းများမှရရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါးဆီကိုလွှတ်ရန်ဖိအားပေးသည်, ထို့နောက်ငါးများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းနည်းစနစ်များဖြင့်ငါးအစာအဖြစ်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်သည်.
ငါးဆီသည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးမှာ၎င်းသည်ရှည်လျားသောကွင်းဆက် Omega-3 fatty acids များကိုတစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်, အရာငါးနှင့်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. လူသားတွေလိုပဲ, ငါးအများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရှည်လျားသောကွင်းဆက် Omega-3 fatty acids များကို စုစည်း၍ မရပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အစားအစာထဲကနေရမည်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊. ယဉ်ကျေးမှုငါး၏အမှု၌တည်၏, အိုမီဂါ -၃ သည်အဆီများသောငါးများသို့မဟုတ်အစာတွင်ငါးမျှားခြင်းများမှငါးဆီပါဝင်သည်).
Fishmeal သည်လူ့စားသုံးမှုအတွက်အသုံးမပြုသောသေးငယ်သောအရိုးသေးငယ်သည့်ငါးများသို့မဟုတ်ငါးမျှားခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မြင့်မားသောပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုဖြစ်သည်။. feeds တွေကိုပရိုတင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်.
ဤပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပီရူးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများမှရရှိသည်, ချီလီ, အီကွေဒေါ, အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်သြစတြေးလျသို့တင်သွင်းသည်.
ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများကိုငါးများမှသူတို့လိုအပ်သောအာဟာရများရရှိစေရန်ထည့်သွင်းထားသည်. ၄ င်းတို့သည်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်.
ထိုကဲ့သို့သောဂျုံ gluten အဖြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ, lupine မုန့်ညက်နှင့်ပဲပုပ်ပရိုတင်းပါဝင်မှုကို feeds များတွင်ပရိုတိန်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်. Fish feeds သည်မျှတသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ပရိုဖိုင်းကိုရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, နှင့်ဤအရပ်မှဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်းတစ် ဦး ရောနှောအသုံးပြုကြသည်.
ဂျုံနှင့် faba bean များပါဝင်မှုသည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်. ဓာတ်ဓာတ်ပုံစံကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုသကြားဓာတ်အဖြစ်ခွဲခြားပြီးစွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုသည်, သောအသားစားငါးမျိုးစိတ်များအတွက်အဟာရတန်ဖိုးကန့်သတ်ရှိပါတယ်. အစားအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်သည်တောင့်တောင့်ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်အတွက်၎င်းကိုမစားသုံးမီရေထဲသို့ ၀ င်သောအခါပြိုကွဲသွားနိုင်ခြေနည်းစေပါသည်။. ငါးများကိုစက်မှုအစာကျွေးခြင်းစနစ်မှတစ်ဆင့်အစာကျွေးသောအခါအစာကျွေးခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များမှရှောင်ကျဉ်ရန်အတွက်တောင့်တောင့်သက်တမ်းကိုလိုအပ်သည်။, ရေထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်အစာသေးငယ်သောအမှုန်ပမာဏလျှော့ချခြင်းနှင့်ငါးထဲသို့မစားသုံးမီအစာမှရေထဲသို့အာဟာရများစွန့်ပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချခြင်း.
Skretting Australia တွင်အသုံးပြုသောမြေသြဇာတိရိစ္ဆာန်များသည်သြစတြေးလျမှသာဖြစ်ပြီးသြစတြေးလျမှပေးသောအသင်းမှအသိအမှတ်ပြုသည့်ပေးသွင်းသူများမှသာရရှိသည် (NOW) နှင့် AQIS ပို့ကုန်အသိအမှတ်ပြုကြသည်. ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပေးသွင်းသူခွင့်ပြုချက်အစီအစဉ်နှင့် Skretting ကိုယ်စားလှယ်များမှပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကိုခံကြရသည်. အသုံးပြုသောတိရိစ္ဆာန်များကိုလူသားစားသုံးရန်မွေးမြူသည်; ထို့ကြောင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်.
Land-တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပရိုတင်းဓာတ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်, ဥပမာ - ကြက်ဘဲအစာသည် fishmeal ၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပရိုဖိုင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်, ဆော်လမွန်နှင့်ရေချိုငါးကဲ့သို့သောအသားစားသတ္တဝါများအတွက်ငါးအစာကိုသင့်လျော်စွာအစားထိုးပေးခြင်း.
Astaxanthin သည်သဘာဝအားဖြင့် carotenoid ဖြစ်ပြီးသူတို့ကျွေးသော crustaceans မှ salmon ထုတ်ယူသည်. ဤသည် carotenoid ထို့နောက်ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်း၌ချ။ ကြီးမားသော salmonids ၏မွေးမြူရေးသံသရာစဉ်အတွင်းကြက်ဥသို့သယ်ယူပို့ဆောင်သည်. ငါးသည်ငါးမွေးမြူရေးတွင် astaxanthin ကိုဆော်လမွန် ပြုလုပ်၍ မရပါ, သဘာဝ - တူညီသော Astaxanthin ကိုအစာထဲသို့ထည့်နိုင်သည်.
ဇယား 1. အကဲဖြတ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်အစားအစာများအတွက်ငါးတစ်ပိုင်းလုံးအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအလားအလာရှိသောပရိုတိန်း၏အခြားရင်းမြစ်များ။
ငါမုန့်ညက်ပါ ကြက်၊ အင်းဆက်ပိုးလောင်းလောင်း
မုန်ညင်းမုန့်ညက် အမွေးအတောင် လူပျိုဆဲလ်ပရိုတိန်း
နေကြာမုန့်ညက် ပုစွန်နှင့်ကဏန်းမုန့်ညက် မြက်
Oat groats သွေးမှုန့် အရွက်ပရိုတိန်း
ချည်မုန့်ညက် ငါး silage ဟင်းသီးဟင်းရွက် silage
ဂျုံအလယ်အလတ် အသားမုန့်ညက် Zooplankton (kill, စသည်တို့)
ပရိုတိန်း (အကွာအဝေး), %
ဇယား2အချို့သောဒြပ်ပေါင်းများသည်သိပ္ပံနှင့် / သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ငါးကြီးထွားမှုအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသံသယရှိသောနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
Phytates အားလုံးအပင်အစားအစာများ tuffs
Mycotoxins (ကွမ်းခြံကုန်း) ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအခြေခံသောအစားအစာများသည်သဘာဝအလျောက်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်သောသက်ရှိများမှထုတ်လုပ်သည်
Cyclopropenoid ဖက်တီးအက်စစ် လဲမှေးဆီနှင့်အစားအစာ
trypsin inhibitors ပဲပုပ်နှင့်မုန်ညင်းမုန့်ညက်
Mimosine အရွက် (Leucaena leucocephala)
Haemoglutinins Soyabean မုန့်ညက်
အောက်ဆိုဒ်နှင့် polymerized lipids ငါးမုန့်ညက်; ကြက်ဘေးထွက်ပစ္စည်း, krill မုန့်ညက်
Histamine နှင့် putrescine ငါးမုန့်ညက်, အဓိကအားဖြင့်တူနာငါး